Adeegga ugu Fiican VIVIVE iyo Alaab -qeybiye | Hongyu
Viveve Inc. Viveve waxaa ka go'an inay horumariso xalal cusub si loo wanaajiyo fayoobaanta guud ee haweenka iyo tayada nolosha. Shirkaddu waxay diiradda saareysaa ka ganacsiga qalab caafimaad oo kacaan ah, aan qalliin ahayn, oo aan able ahayn oo dib-u-habeyn ku sameeya kolajka oo dib u soo celiya unugyada xubinta taranka. Nidaamka Viveve® ee caalamiga ah ee shatiyaysan wuxuu ku darayaa tiknoolijiyada Cryogen-cooled Monopolar Radiofrequency (CMRF) si ay si isku mid ah u gaarsiiyaan kuleylka mugga iyadoo si tartiib ah u qaboojinaysa unugyada dusha si ay u dhaliso neocollagenesis hal kalfadhi xafiiska dhexdiisa ah. Waddanka Mareykanka, Nidaamka Viveve waxaa caddeeyay Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka (FDA) si loogu adeegsado hababka qalliinka guud ee elektiroonigga iyo hemostasis. Oggolaanshaha sharciyeynta caalamiga ah iyo oggolaanshaha ayaa loo helay habacsanaanta siilka iyo/ama hagaajinta tilmaamaha shaqada galmada in ka badan 50 waddan.
Viveve waxay sii wadaa inay sii hormariso barnaamijkeeda horumarinta kiliiniga ee kaadida ceshad la'aanta (SUI). Sida la soo sheegay bishii Diseembar 2020, FDA waxay oggolaatay isbeddelada borotokoolka tijaabada PURSUIT ee muhiimka ah ee Mareykanka waxaa loogu talagalay in lagu xoojiyo daraasadda guud iyo kartideeda si loo gaaro yoolka ugu dambeeya ee waxtarka. Isbeddellada daraasadda oo ay ku jiraan kororka cabbirka tijaabada iyo shuruudaha xulashada bukaanka oo aad u adag ayaa ka dhashay hagitaan ka yimid Guddiga La -talinta Caafimaadka ee Viveve markii dib -u -eegis lagu sameeyay natiijooyin wax -ku -ool ah oo ka soo baxay suuragalnimada SUI ee Shirkadda iyo daraasadaha hore. Viveve waxay heshay oggolaanshaha FDA ee barnaamijkeeda Ka-dhaafitaanka Aaladda Baadhista (IDE) si ay u qabato tijaabinta badan, kala-sooc, laba-indho-la ', tijaabinta PURSUIT ee sham-xakamaynta si loo hagaajiyo SUI ee haweenka bishii Luulyo 2020 iyo oggolaanshaha FDA ee wax-ka-beddelka ay codsatay ee nidaamka IDE sida ayaa la soo sheegay 10 -kii Diseembar, 2020. Bilaabidda maxkamadeynta waxaa la soo sheegay Janaayo 21, 2021 waxaana socota diiwaangelinta maadada. Hadday fiicantahay, natiijooyinka ka soo baxa tijaabada PURSUIT waxay taageeri kartaa tilmaamaha SUI ee cusub ee Maraykanka
IN TH Nidaamka Viveve wuxuu bixiyaa daaweyn hal-kulan ah si loo abuuro kolajka iyo dib u soo celinta unugyada. The dual mode VIVEVE TREATMENT COOLS OO ILAALIYA BURAANKA INTII UU KULAALINAYO TISSUE DEEPER. Daaweynta Viveve waa ammaan iyo waxtar labadaba.
WAXYAABAHA DHAQANKA waxay xoojiyaan muruqyada sagxada miskaha waxayna dejiyaan muruqa wax -ka -qabashada iyagoo adeegsanaya electrostimulation patent leh oo leh heerar sare iyo sare oo kicinta si loo daaweeyo kaadida iyo ceshad la'aanta kaadida. Helitaanka waa aalad FDA-nadiifisay.
DAAWEYNTA VIVEVE WAXAA LOO GUDBIYAA SIYAASADDA VIVEVE, oo ah aalad shucaac leh oo qaboojiyaha qaboojiyaha leh oo dib-u-dhisa kolajka dabiiciga ah si loo hagaajiyo hufnaanta qaab-dhismeedka xubinta taranka iyo taageeridda kaadi-mareenka. Nidaamka waxaa loogu talagalay in lagu daweeyo haweenka la kulma kaadida oo ku adkaata - kaadida oo daata markay qoslayso, qufacayso, hindhisayso, ama boodayso; cillad galmo iyo habacsanaanta siilka - fidinta iyo ballaarinta unugyada siilka dhalmada ka dib, oo leh da'da ama ay sabab u tahay isbeddellada hoormoonka. Daraasaduhu waxay muujiyeen natiijooyin joogto ah ilaa 12 bilood.EC
Xiga: Daaweynta Ultherapy